Liyashuba elibhekene nesikhulu samaphoyisa - Ilanga News
Home Izindaba Liyashuba elibhekene nesikhulu samaphoyisa
Liyashuba elibhekene nesikhulu samaphoyisa
Ubufakazi “benkabi” bushayele isipikili sokugcina
uLt Col Khephu Ndlovu oyisikhulu samaphoyisa, ubhekene necala lokuzama ukuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho ngecala lokubulala
elibhekene nenduna eyisihlobo sakhe. Kusukela kwesobunxele nguSgt Bonginkosi Dlamini, uNkk Sibongile Ndlovu, uMnu Funokwakhe Ndlovu,
uLt Col Ndlovu noMnu Lindokuhle Ndlovu. ISITHOMBE NGU: SANDILE MAKHOBA
KUSINDA kwehlela ngecala elibhekene nesikhulu samaphoyisa saseThekwini, esiboshwe nezihlobo zaso ngecala lokugwazelwa isamba sika-R120 000, okuthiwa sawufunjathiswa ukuze sizophaza-misa uphenyo ngecala lokubulala elibhekene nenduna yaKwaNdengezi, entshonalanga yeTheku.
Ebufakazini obethulwe ‘yinkabi’ ngeledlule uMnu Celani Dlamini, ishayelele isipikili sokugcina sokuthi bonke laba bayathinteka kuleli cala.
ULt Col Khephu Ndlovu, osebe-nzela esiteshini samaphoyisa eBhe-kithemba, kwa-BB, eMlazi, uvele enkantolo yaMantshi ePinetown ngoLwesihlanu nabasolwa abayisi-hlanu aboshwe nabo, uSgt Bonginko-si Dlamini ongumsolwa wokuqala futhi owayengumphenyi wecala lokubulala elibhekene nenduna, uNkk Sibongile Ndlovu ongumsolwa wesibili oyinkosikazi yenduna, uMnu Felokwakhe Ndlovu ongumso-lwa wesithathu, uMnu Funokwakhe Ndlovu oyinduna noLindokuhle Ndlovu ongumsolwa wesihlanu
ULt Col Ndlovu ungaphandle ngebheyili ka-R10 000 noLindokuhle ungaphandle ngebheyili ka-R5000.
Induna, inkosikazi yayo nephoyisa bangaphakathi. Laba basolwa ngokuzama ukungenelela ecaleni elibhekene nenduna lokubulala, ngokuthi baphazamise ukuphenywa kwecala elenzeka ngo-2018.
Kuthiwa uLt Col Ndlovu noSgt Dlamini owayephenya icala elibhe-kene nenduna lokubulawa kukaMnu Thulani Nxumalo, basebenzisa amandla abo okuba ngamaphoyisa ukuze kuphazamiseke uphenyo.
Kuthiwa uMnu Ndlovu (induna) waboshwa nenkabi yakhe, uMnu Celani Dlamini, okwathi esengapha-kathi ejele, wajika waphenduka ufakazi wenkantolo, wagcina ngokudedelwa.
Ngokubona ukuthi uCelani uphe-the ubufakazi obunzima ngecala lokubulala induna ebhekene nalo, kuthiwa yahlela nenkosikazi yayo ukuba ikhulume nomphenyi wecala, uSgt Dlamini, bathembise ukufu-mbathisa uCelani imali ukuze anga-be esaba ngufakazi ecaleni lenduna.
Kuthiwa uSgt Dlamini wazibophe-zela ukuthi uzokhuluma noCelani, ukuthi angabe esaya ukuyofakaza ecaleni. Kuthiwa wanikwa u-R120 000 ngalowo msebenzi, kodwa kwa-gcina kungenzekanga njengoba uCelani waqhubeka ‘nokuyocula enkantolo’.
Ngemuva kophenyo olunzulu no-bufakazi obalethwa nguCelani, ku-gcine ngokuthi kuboshwe uSgt Dlamini ekuqaleni konyaka odlule ngemuva kophenyo olwaveza ukuthi wakhokhelwa imali ukuze aphazami-se uphenyo lozakwabo.
Kuvela ukuthi isamba semali sakhishwa ngoMandulo (September) wango-2019. Kuthiwa ngalo lolo suku okwakhishwa ngalo imali, inkosikazi yenduna yahlangana noLt Col Ndlovu esiteshini samaphoyisa saseDurban Central, kukhona abayoku-bhunga.
Kuthiwa iqhinga labo lokuphaza-misa uCelani ukungabe esabethula ubufakazi enkantolo, labhuntsha njengoba uCelani engazange ayinge-ne eyokufunjathiswa imali, waqhu-beka waba ngufakazi wenkantolo.
Ngesikhathi bevele enkantolo laba basolwa ngoLwesihlanu, umshushisi uMnu Lawrence Gcaba udwebele inkantolo isithombe ngo-kwenzeka, kuhlelwa ukuba kuphaza-nyiswe uphenyo olwalwenzeka ngecala lokubulala elibhekene nenduna.
Uphinde waveza ukuthi inkantolo inabo ubufakazi basebhange obu-khombisa ukuthi kwakhishwa uR120 000 kwi-akhawunti yasebhange yenduna. Le mali yakhishwa yinkosikazi yayo, njengoba yona yayisive-le isiboshiwe.
Uthi uLt Col Ndlovu wasebenzisa isikhundla sakhe ukunxenxa uSgt Dlamini ukuyokhuluma noCelani njengoba babexhumana kakhulu naye esengumphenyi wecala ukuba ahoxise ukuyoba ngufakazi.
Umshushisi ube esencenga inka-ntolo ukuba ingabubukeli phansi ubufakazi obethulwe nguCelani kuleli cala ngesikhathi egeqa amagula ngetulo elalakhiwa, ukuthi angabe esaya ukuyofakaza enkantolo ukuze lizophelela emoyeni icala lokubulala.
Icala liguqile ngoLwesihlanu, kulindeleke ukuba liphinde libuyele enkantolo ekuqaleni kukaNtulikazi (July) sekuyophuma isinqumo ngalo.
Previous articleIsikhulu se-Pirates sichitha eka-Hunt
Next articleKubulawe ngesihluku isalukazi ebesihlala sodwa